Dowladda Indonesia barashada waxtarka Seeraar ayaa sida maalgelinta
Xukuumadda Indonesian ayaa ka fikiraya Seeraar ayaa isticmaalo qalab maalgelinta, Futures Exchange Board Kormeerka Wasaaradda Ganacsiga ee (Bappebti) ayaa sheegay in.
"Isticmaalka Seeraar sida qalab lacagta waa ka mamnuuc, laakiin sida ku saabsan u isticmaalaya sida qalab maalgelinta? Ma this ogol yahay ama ma?"Madaxa Bappebti Bachrul Chairi ayaa sheegay Talaadadii in Jakarta, sida ay soo sheegeen kompas.com.
Indonesian Law No. 7/2011 on dalalka lacagta Rupiah waa macaamilka iyo bixinta qalab kaliya ee rasmiga ah ee dalka.
Bachrul sheegay Bappebti barataa isticmaalka suurto galka ah ee Seeraar sida qalab maalgelinta. "Iyada oo daraasadda, waxaan doonayaa in aan arko haddii Seeraar waa la daaweyn karaa sida hanti ah digital,"Ayuu yiri.
kormeerka Market iyo xafiiska horumarinta madaxa Dharmayugo Hermansyah at Bappebti ayaa sheegay in ururka arkay fursad wayn ee ganacsiga wax soo saarka Seeraar.
Dhanka kale, Wasiirka Maaliyadda Sri Mulyani Indrawati sheegay in jirin xeerka dalka mamnuucay muwaadiniinteeda ka maalgashiga cryptocurrency ah. "Waa ilaa dadka si ay u isticmaalaan Seeraar sida qalab maalgelinta,"Waxay ku nuuxnuuxsatay.
heshiis First xamuulka qaada Seeraar sarreen ka Russia si ay Turkey
Cryptocurrencies sameynayaan he'adaha ganacsiga badeecadaha cuntada.
Heshiiska ayaa xamuulka horeysay degay Seeraar waxaa la dilay bishii la soo dhaafay on weel sarreen waday ka shipper top Russia Turkiga, sida laga soo xigtay Ra'iisul Shipping Foundation, hawgal ka dambeeya macaamil.
shixnad The qayb ka mid ah imtixaanka tijaabada ah ee nidaamka bixinta blockchain Ra'iisul Shipping Foundation ee badeecooyin bulk ahaa, ayuu yiri Madaxa Maamulka Sare Ivan Vikulov.
technology digital ledgerka ku salaysan awood u siin doona processing degdeg ah lacagaha iyo diinta iyo ka cryptocurrencies, sida laga soo xigtay shirkadda, iskaashi ka dhexeeya ku salaysan Gibraltar ku furmi karaan Capital Ltd. iyo Somailand markab Interchart LLC. Kooxdan ayaa sidoo kale qorsheyneysa in la abuuro ay lacagta digital gaar ah.
CEO of bangiga ugu weyn Russia ee: Cryptocurrencies waa in aan la mamnuucay
banker Ruush saameynta Herman Gref, oo madax ka ah Sberbank, ayaa xaqiijiyay booskiisa in la mamnuuco of cryptocurrencies.
maamulka Ruush iyo saraakiisha dhaqaale waa in ay dulqaad of cryptocurrencies iyo technology blockchain, Wakaalada wararka Ruush TASS xigtay CEO Sberbank Herman Gref sida sheegaysa. banker The tallaabo dheeraad ah u baxay, adkaynaya in cryptocurrencies weli la fahamsan yahay iyo qawaaniin wax la qiyaasi iyo tixgeliyo, ma socodnimo.
Gref yiri “Waxaa [crypotocurrencies] waa in aan la mamnuucay, sida ay tahay a technology cusub weyn ee horumarinta, oo aan ninna weli waa inay fahmaan.”
Bartamihii 2016-, iyada oo wasaaradda maaliyadda ee Ruush (guuldareystay) isku dayaan inay soo bandhigto biilka ganaax Seeraar a in dambi Seeraar adopters, Gref bayaan ka hadlay haysta qadar yar oo ah Seeraar oo iska soo horjeeda biilka. Isla mar, Wasaaradda maaliyadda Russia ayaa soo jeediyay xukun xabsi ah ilaa 7 sano adopters Seeraar.
Airport Brisbane inay aqbalaan Seeraar
Airport Brisbane ayaa laftiisa ku tilmaamay sida garoonka diyaaradaha marka hore lacagta digital saaxiibtinimo dunida ee.
Garoonka Australiyaanka ay iskaashi la tiro ka mid ah dukaamada iyo TravelbyBit. Socotada ugu dhakhsaha badan awood u yeelan doonaan in la isticmaalo habka lacag bixinta cryptocurrency TravelbyBit ee, taas oo ka mid ah Seeraar iyo lacagaha kale ee digital, inuu wax la cuno iyo dukaanka at badan oo dukaamada kala duwan ee guud ahaan labada boosteejada.
iskaashi wuxu xoojinayaa Ujeedada Brisbane Airport ee ay u taageeraan ganacsiyada maxaliga ah, hagaajin waayo-aragnimo rakaabka, oo ay noqoto hoggaamiye ee meel garoonka diyaaradaha abuurnimo digital ah.
From gaadiidka garoonka diyaaradaha si ay u hoy hotel raaxo, iyo cuntada iyo madadaalada goobaha in sabirna Valley Brisbane ee, Brisbane ayaa bixiyay by dadka deegaanka sida 'Crypto Valley' leh in ka badan 20 baayacmushtariyaasha aagga hadda qaato lacagaha lacagta digital.
Kaaleeb Yeoh, CEO of TravelbyBit, ayuu yiri "Mar kasta oo aad u safri dibada aad leedahay si ay ula lacagaha kala duwan ka qabtaan iyo ma ogaan kartid waxa heerka sarrifka bangiyada waxaa aad ku amraya. Halkan TravelbyBit waxa aan u qaadida dhaqdhaqaaqa safarka Seeraar. lacagta Digital safarka dunida oo dhan. Waa wax iska fudud, ammaan ah oo ma jirto kharashka bangiga,"Ayuu yiri Mr Yeoh.
app ganacsiga Stock Robinhood in aan bilowno Seeraar & ganacsi Ethereum
Macaamiisha ee California, Massachusetts, Missouri, Montana iyo New Hampshire awoodaan in ay ku ganacsan Seeraar iyo ethereum marayo app laga bilaabo bishii February noqon doonaa, Robinhood dhawaaqay Thursday. Dhanka, macaamiisha oo dhan hadda u helida qiimaha iyo hesho qaylodhaan, waayo, 16 cryptocurrencies on app.
Robinhood bilaabay in ku dhow lix sano ka hor si ay macaamiisha, maalgashadayaasha intooda badan ka yar, ganacsiga kaydka dhex casriga ah ay for free. Robinhood kale oo uu leeyahay adeegga premium bixisay a, iyo December bilaabay ganacsiga fursadaha. Shirkadda hadda leedahay in ka badan 3 million users, la 78 boqolkiiba dhacaan wax-u category da'da millennial ah 18 si ay u 35 sano jir ah.
Waayo, ganacsiga cryptocurrency, Robinhood ku yeelan doonin inta ugu yar maal ama ugu badan, iyo ma xadka bixitaanka. The bilowga qaban doona inta badan lacagta birta ah digital offline in waxa la yiraahdo Qaboojiyayaasha. Dhaqanka ka hortagtaa Anonymous ayaa ka xaday eegtahay.
Dabayaaqadii January, it became kno...
Post Previous:Payment karbaash operator diido Seeraar
Post Next:weerar hubeysan ayaa waxaa ka go'an on Crypto Canadian ah Exchange